Posted by San Su Kyi Naing March 12, 2019
ရိုးရိုးပဲမေွးမေွး၊ ခွဲစိတ်ပြီးပဲမေွးမေွး ကောင်းတာ ဆိုးတာတေွတာတေွဟာ နှစ်ဖက်လုံးမှာ ရှိပါတယ်။ သဘာဝ အတိုင်း ရိုးရိုးပဲ မေွးခဲ့ကြပြီး ရိုးရိုး မမေွးနိုင်တဲ့သူမှသာ ခွဲစိတ်မေွးဖွားခဲ့ကြတာဆိုတော့ ဘယ်လိုမေွးရင် ပိုကောင်းမလဲဆိုတာ သိသာပါတယ်။။ ရိုးရိုးမေွးပေးရတာဟာ ခွဲစိတ်မေွးပေးရတာထက် အများကြီး ပိုပင်ပန်းြ့ပီး အများကြီး ပိုတာဝန်ကြီးပေမယ့် ရိုးရိုးမေွးလိုက်တာဟာ တစ်သက်လုံးကောင်းစားဖို့ တစ်ရက်တာ အနာခံလိုက်တာ ဖြစ်သည်။ခဏတာနာမှာကြောက်လို့ ခွဲစိတ်မေွးလိုက်တဲ့ သူဟာ အခန့်မသင့်ရင် တစ်ဘဝလုံးစာ နာချင်နာနေ တတ်တာ မေမေတို့ရေ…….။ ရိုးရိုးမေွးဖို့ ဗိုက်နာနေတဲ့သူက ကျှတ်…. ကျှတ်…. ကျှတ်…. ကျှတ် နဲ့ နာကျင်နေပေမယ့် ။ ခွဲမေွးမယ့်သူကတော့ အေးဆေးဖြစ်နေပါမယ်။
ကလေးမေွးပြီးတဲ့ အချိန်အဲဒီ နှစ်ယောက်ကို ပြန်ယှဉ်ကြည့် .။ ရိုးရိုးမေွးထားတဲ့သူက ကလေးလေး ပိုက်ပြီး ပြုံးပြုံး နဲ့ လျေှျာက်သွားနေချိန်။ ခွဲစိတ်နေမေွးထားရတဲ့သူက လက်မှာ Drip လေး တန်းလန်း တန်းလန်းနဲ့ ပက်လက် ကလေးကို ချီခွင့်မရသေးပါဘူးနော်။မေမေတို့လည်း ဘယ်လိုမေွးဖွားရတာ ကောင်းမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစာလို့ရပါပြီနော်..။
Ref; မေ့ရင်သေွး မဂ္ဂဇင်း